Translate Serbian to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Serbian to Myanmar (Burmese), Serbian to Myanmar (Burmese) translations, Serbian to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Здраво, како си မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Има ли кога? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Толико те волим ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Колико кошта овај хамбургер? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Можете ли ми звати такси? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
Жао ми је ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Интересује ме ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Мој лет је одложен အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Овде сам због посла ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Здраво, моје име је မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Жао ми је, али сам ожењен ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Желео бих да вас питам ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Можете ли ме одвести на аеродром? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Које је време сада, молим вас? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Где је најближа полицијска станица? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Могу ли да позајмим ваш телефон пуњач молим? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Да ли ми можеш помоћи? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Наручите ми пиће, молим вас? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Колико то кошта? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Ја сам алергичан на глутен ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Зовите доктора ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Има ли доктора? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Могу ли добити позив? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Назови ме шефа, молим те. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Ово место је веома лепо ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Водите ме у хотел, молим ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Који је број моје собе? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?